သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအား အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုအပေါ်
ကုလသမဂ္ဂ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများအမြန်ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့်
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်တောင်းဆို ။
The Government of Myanmar has been urged by the UN human rights
office to release over 100 students and other protestors arrested after their participation inademonstration on Tuesday.The protestors in the central
town of Latpadan in the southern Bago region of Myanmar were reportedly
calling for reform in the education system.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has expressed concern about reports of the use of excessive force by the police.
The UN said that whileanumber of the 127 protestors who were reportedly arrested were later released, most of them are still detained in Tharawaddy
prison.Approximately 60 of them have been charged under various laws.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) noted
that the government has started an inquiry into another incident involving
the dispersal of protests in Yangon on5March.
OHCHR Spokesperson Ravina Shamdasani says the government of
Myanmar is being urged to also investigate the handling of Tuesday's
"We urge the Government to unconditionally release all those detained
for the exercise of their rights to peaceful assembly and freedom of
expression and to amend the laws that place unnecessary and
disproportionate restrictions on people's rights, particularly the Law
on the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession." (19")
Ms Shamdasani said any use of force should be proportional to the
Government engages directly in terrorism asatool of their domestic policies.
သိန်းစိန် စစ်အစိုးရ ၏ လူသားမဆန် သည့် ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ၊ ရာဇ၀တ်မှု များ ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုများ ၊ ကို နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ် ခုံရုံး ကို တင်နိုင်အောင် အထောက်အထားများနှင့် ဖော်ထုတ်ကြ။
at 07:030comments Links to this post
ကိုးကန့်မြန်မာ အစိုးရ အမှီး ခြင်း ချိတ် သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်။ ( အမှတ် ၃ )
ဖုန်ကြာ်းရှင်ကို ရန်ကုန် ကို ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ ပထမ ဆုံးခေါ်လာသူမှာ ၁၉ ၉ ၇ ခုနစ် ဒုတိုင်းမှု ဗိုလ်မှုးချုပ်သိန်းစိန် ( ယခု ဦးသိန်းစိန် ) ဟုသိရပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ နှင့် ခင်ညွန့် အမိန့် အရ ၁၉ ၉ ၇ ခုနစ်မှာ ၂၀၀၁ ခုနစ်အတွင်းမှာ ၁၆ ခေါက် ဟယ်လီကော်ပတာနှင့် ခေါ်ပေးခဲ့ရကြောင်း စီအိုင်းအေ မှတ်တမ်းအရသိရတယ်။ ဘိန်း ဖြူ ကို နစ်ဖက် စလုံး ပူးပေါင်း ချက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့DEA မှတ်တမ်း များ အရသိရတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ကို အမေရိကန် က လွဲ ပြောင်းပေးဖုို့ တောင်းဆိုခဲ့
ပါတယ် ။ မြန်မာ့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေမပေးပါ။ နိင်ငံသက္ခာ အလွန်ကျခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့လဲဆိုတော့ အတူတူ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာတွေ
ပေါ်ကုန်မှာစိုးလုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မောင် အေး ဟာ ဘိန်းလုပ်ငန်း ကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင် ခဲ့သူ
လုို့စီအိုင် အေ က မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကိုးကန့် မှာ တာဝန်ကျတဲ့ မြန်မာ စစ်တပ် က တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်ကို ပြန်လျှင် ယာမားဆေးကို ဆက်လက် သယ်ဆောင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာမား ဆေး ဒေါ်လာ ၅ရာဖုိုးက ရန်ကုန် မှာ ဒေါ်လာ ၂ထောင် ခန့် ရတယ်။ ကိုးကန့် ဒေသ တာဝန် ကျ ဗိုလ်မှုးချုပ်အဆင့် ကနေ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်
စစ်သားများ အကုန် ပတ်သက်နေကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် သံရုံး ( ၂၀၁၄ )ခုနစ် အစီရင်ခံစာ မှာ ဖေါ်ပြထားတယ်။ စစ်ဗိုလ်များရဲ့ မင်္ဂလာ ဆောင် လက် ဆောင် အဖြစ် ပါ ကိုးကန့် မှ ယားမား ဆေးပြားများကို ပေးကြတယ်လုို့ အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြထားတယ်။
ရန်ကုန်မှာ မူယစ်ဆေးဝါး အလွန် ပျံနှံနေတဲ့အဓိက တရားခံ တစ်ဟာ
မြန်မာ တပ်မတော်ဖြစ်တယ်။ နံပတ် နစ်က ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့ ကိုးကန့် တပ်ဖြစ်တယ်။
ကိုးကန့် ကိုတရုပ်အစိုးရက ကူညီ တာ ဆိုပါက တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါ။ ဖုံးကြားရှင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ကို သိမ်းဆည်းကြောင်း တရားဝင်ကြေညာပါ။ ထုိုသို့ မလုပ်ပါက ကျေင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို အာရုံလွဲမှုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ၇၈ လမ်းပေါ်က လူနေဆိုင်ခန်းများ
၉။ ကျွန်းစိုက်ခင်းဧက ၈၀၀၀
၁၁။ အကြီးမြန် ယူကလစ်စိုက်ခင်းများ
၁၂။ မန္တလေးသိပံ္ပလမ်းပေါ်မှ ယူကလစ်နဲ့ငှက်ပျော စိုက်ခင်း
၁၄။ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းပေါ်က နေအိမ်နဲ့ ကုမ္ပဏီရုံး
ပြည်ခုိုင် ဖြိုး ပါတီ (ခ) ကြံ့ဖွတ် ပါတီမှာ မူယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သူများ
၁။ ပိုင်ဆိုချင် (ခေါ်) ပိုင်စောက်ချဉ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂။ လူကိုးရှိ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃။ ဟိုရှောက်ချန်း (ခေါ်) ဦးဟော် (ခေါ်) ဟော်လောက်စန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၄။ ကျောက်ဒယ်ချန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၅။ မြင့်လွင် (ခေါ်) ဝန်ခိုးတာ့၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ြ
ကိုးကန် နဲ့မြန်မာ - သူတို့ မကြာခင် စေ့ စပ်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လုပ်မယ်။ MPC ထံကို ရောက်လာမယ်။
တရုပ်အစိုးရက ကြားဝင် ဆောင်ရွက် နေပြီ ဟုသိရပါတယ်။
တကယ်လုို့ဒီအချက်အလက်တွေကို ငြင်းဆိုမဲ့သူရှိပါက အချက်အလက် မှတ်တမ်းများ
(ထပ်မံ ထုတ်ပေးနိင်ပါတယ်။ )
Every Voice Counts on education reform!
ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်တဲ့အမှု၊ နိုင်ငံတော် မတည်ငြိမ်မှု ကို ဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာမဟုတ်ဘူး။
အနာဂတ်တိုင်းပြည်၊ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် ထောက်ခံမှု၊ တောင်းဆို ပါဝင်ပက်သက်မှုတွေ မရှိရင်တော့ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တိုင်း မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကော၊ လွှတ်တော်အမတ် တွေ ကော နောင်လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေရဲ့ ရလာဒ်တွေ မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်။
ယင်းအဖွဲ့ကြီးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု တွေမှာ ပြည်တွင်း ဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒ ရှိနေသော်လည်း၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဟန့်တားထားမှု၊ တင်းကျပ်သည့် တားမြစ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင် ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ မရှိဖြစ်နေခဲ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
ဒါအပြင့် နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခ တွေ ရှိနေတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု တွေမှာ တရားဥပဒေ၊စံနှုန်းစံထားတွေ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှာ အားနည်းနေပြီး၊ ထိရောက်စွာ တားစီးမှု မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေသို့ တွန်းပို့ပေးနေကြောင်း အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြပါရှိသည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ် မှုတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ သစ်ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုများကို အချိန်ကာလအားဖြင့် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် သစ်တောရင်းမြစ်တွေ ပျက်စီးနေခြင်း၊ ကျောက်မျက်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အပါအ၀င် သဘာဝသံယာဇာတတွေ အလျင်တလို ထုတ်ဖော်တူးယူ နေမှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံး နေခြင်း၊ ရေကာတာများတည်ဆောက်နေမှုတွေကြောင့် ရေခန်းးခြောက်မှု၊မြေပြိုမှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် လာကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတယ်။ လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်နဲ့ ပင်လယ်ဒီရေတွေကို ဟန့်တားနိုင်ဖို့ ဒီရေတောတွေ ကိုလည်း ထိန်းသိမ်း မှုမရှိ၊ သစ်တောတွေကို လည်း ထိမ်းသိမ်းမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိနေကြောင်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
at 19:250comments Links to this post
ပန်းခြံနဲ့ ကစားကွင်းတွေ ရှားပါးလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဧကကျယ်ကျယ်နဲ့ အများပြည်သူအတွက် နေရာလပ် ကျန်တာဆိုလို့ သမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်း တစ်ခုပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျန်တဲ့ မြေကွက်ကျယ်တွေကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အုပ်ချုပ်သူ အဆက်ဆက်နဲ့ ပေါင်းပြီး အမွေခွဲသလို ခွဲယူထားလို့ မကျန်သလောက်ပါပဲ။ အခု တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့ သမိုင်းဝင် ကွင်းကြီးကိုပါ စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။
ဒီသတင်း အပေါ်မှာ အလွှာအသီးသီးက ပညာရှင်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပါ လုံးဝ ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ တကယ်လို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ် ဆိုရင် ခွင့်ပြုတဲ့သူဟာ ဘယ်အစိုးရ လက်ထက်ရောက်ရောက် တာဝန်ယူရမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အထိ ကန့်ကွက်ပြောကြား လာကြပါတယ်။
Mariana Investment Pte.Ltd ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံက သစ်လုပ်ငန်း အဓိက လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Diamond Mercury ကုမ္ပဏီအုပ်စုက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်က ဦးစိန်လွင် ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ဖို့တင်ပြတဲ့အပေါ် အားကစားကွင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တာဝန်ယူထားတဲ့ အားကစား ၀န်ကြီးဌာနကလည်း ကန့်ကွက်မှု မရှိဘူး။ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ တင်ပြတာကိုလည်း သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ Diamond Mercury ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ လုပ်ငန်းရှင် ဦးစိန်လွင်က “ဒီအားကစားသိပ္ပံကြီးကို ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အထပ်မြင့်တွေ၊ အထပ်မြင့်မြင့်နဲ့ အဲယားကွန်းတွေ နေထိုင်မှု အဆင့်မြင့်မြင့်တွေ အကုန်ပါတော့ ၀န်ကြီးကတော့ လက်ခံပါတယ်။ ပိုတဲ့မြေကို CBD လုပ်မှလည်း မြေကြီးက တန်ဖိုးရှိမှာလေ။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်အတွက် Land Mark တစ်ခု ပေါ်လာမှာလေ။ ၂၆ ရက်က ၀န်ကြီးချုပ်လည်း ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ မြို့တော်ဝန်လည်း ပါတယ်။ နောက်ပြီး စီးပွားရေးဝန်ကြီးပေါ့ ရန်ကုန်ကပေါ့။ သူတို့ကို ရှင်းပြတယ်။ သူတို့ကလည်း လက်ခံတယ်။ အဲဒါ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို သွားရှင်းပြတာ။ အားကစားဝန်ကြီးတွေကို ထပ်ရှင်းပြတယ်။ နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ အခါကျတော့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ သစ်တောဝန်ကြီးကို တင်ပြတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လွှတ်တော်အဆောက်အအုံကြီးကို ဆောက်တုန်းက အကြမ်းထည်အဆင့်တင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ အထိ ကုန်ကျခဲ့တာကို ကြည့်တာနဲ့တင် (အချောသပ်စာ ကုန်ကျစရိတ် မထုတ်ပြန်) ACE ကုမ္ပဏီရတဲ့ စီမံကိန်းတွေဟာ ဘယ်လောက် ကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာ၊ တည်ဆောက်ခွင့်ရလို့ အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်အထိ ရခဲ့တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။
မပတ်သက်ဘူး ဆိုပေမယ့် မကန့်ကွက်ခဲ့တာ၊ သဘောတူတာ၊ ဂျပန်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ရင်တော့ မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ ဆိုသလို အားကစားဝန်ကြီးဌာနဟာ ကျိုက္ကဆံကွင်း စီမံကိန်းကို လုပ်ချင်တဲ့ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြနေပါတယ်။
အားကစားဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အခုလို သမိုင်းဝင်နေရာကို စီမံကိန်းလုပ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးထက် ဥပမာ - အောင်ဆန်းကွင်းမှာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၃၂၁ ခန်းရှိတယ်။ တစ်ခန်းကို ပျမ်းမျှ တစ်လ ကျပ် ၁၂၀၀၀ ကျော်ပဲ နိုင်ငံတော်က ငှားခရတယ်။ ဒီလို နည်းပါးလွန်းတဲ့ ငှားခတွေကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်သင့်တာပါ။
ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးကို အားကစားနဲ့ မပတ်သက်၊ အများပြည်သူနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေပါ ထည့်လုပ်ဖို့ စီစဉ်တဲ့ အပေါ်မှာတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့ပြပညာရှင်၊ အားကစားပညာရှင်နဲ့ အလွှာအသီးသီးကတော့ ကန့်ကွက်တယ်၊ ပေးခဲ့ရင်တောင် ပေးခဲ့တဲ့သူက သမိုင်းတရားခံ၊ ဒီလို ပွင့်လင်းမှုမရှိဘဲ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် နောင်အစိုးရ လက်ထက် အဆက်ဆက်ထိ ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ တာဝန်ယူရမယ်၊ တာဝန်ခံရမယ် ဆိုတဲ့အထိ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဒီကိစ္စက လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝ သဘောမတူဘူး။ ရန်ကုန်မှာ အများပြည်သူ စုဝေးနိုင်တဲ့နေရာ၊ အားကစားကွင်းတွေ ရှားနေပြီ။ ပညာရှင်အနေနဲ့ပြောရရင်လည်း Procedure လုံးဝလွဲတဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါပဲ။ တကယ်ဆို Master Plan ဆွဲရမယ်။ ပညာရှင်အစုအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီး ဆွဲရမှာ။ ပြီးရင် အများပြည်သူကို ချပြရမယ်။ ဥပမာ- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရမယ်။ ဆွေးနွေးပြီးမှ လုပ်သင့် မလုပ်သင့်ဆိုတာ ထွက်လာမယ်။
လုပ်သင့်တယ်ဆိုမှ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မယ်၊ တင်ဒါ ဘယ်လိုခေါ်မယ်၊ ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျိုက္ကဆံလိုနေရာမျိုးကတော့ လုံးဝကို မလုပ်သင့်တဲ့နေရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ အများပြည်သူပိုင်အဖြစ်ထားပြီး အများပြည်သူ လိုအပ်တာမျိုးလုပ်ဖို့အတွက် ထားကိုထားရမှာပါ။ သိမ်ဖြူလိုကွင်းမျိုးတောင် ရမယ်ဆို အများပြည်သူပိုင်အဖြစ် ပြန်ယူရမှာပါ”
“သုံးချက် စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ တစ်အချက် မလုပ်ဘဲဒီအတိုင်းထားရမယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် တကယ်အကျိုးအမြတ်ရှိလို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တင်ဒါခေါ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြပြီးမှ လုပ်ရမယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ဒီနေရာမှာ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ ချက်ချင်းဆောက်ရလောက်အောင် လိုအပ်နေသလား။ မဖြစ်မနေလုပ်မှ နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်မှာလား။ မလိုဘူးဆိုရင် အလျင်အမြန်လုပ်စရာ မလိုဘူး။ နောင်အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ ဆက်လုပ်လည်း ရတာပဲ။ အခုတင်ထားတဲ့အတိုင်း ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရအနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ မလုပ်ဘဲနဲ့ ချန်ထားတာတော့ အကောင်းဆုံးပါ”
“ဒါအများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းဝင်ကွင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာလပ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ ထားရမယ့်ကွင်းပါ။ ဒါက အရင်ကတည်းက နာမည်ကျော် အားကစားကွင်းနေရာ။ နောက် ခေတ်အဆက်ဆက် လူထုအစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျိုက္ကဆံကွင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း အသံထွက်ခဲ့သေးတယ်။ အရင်အစိုးရ လက်ထက်မှာဆိုရင် လုပ်ချင်ရင် လုပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တောင် မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ ထားခဲ့တာ။ ဒီလိုနေရာကို အခုလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တောင် တင်သွင်းပြီး မေးမြန်းရှင်းလင်းရမယ့်ကိစ္စပါ”
“ကျိုက္ကဆံကွင်းဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြင်းပြိုင်ကွင်းပေါ့။ မြင်းပြိုင်ကွင်းဆိုတာ ဟိုခေတ်ဟိုအခါရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေရာ တစ်ခုပေါ့။ နောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်တော့ ဒီနေရာက အလုပ်သမား လယ်သမား ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့။ လူထုလူတန်းစား၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခမ်းအနားကြီးတွေကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေရာမှာ ကျင်းပခဲ့တာ။ နောက်ဆုံး တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ပိုင်းမှာ ပြောရင်လည်း ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ပဏာမ ခင်းကျင်းတဲ့အခင်းအကျင်းဟာလည်း ဒီကျိုက္ကဆံကွင်းမှာပဲ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ကျိုက္ကဆံကွင်းက ကိုလိုနီခေတ်ကနေ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်အထိ လက်ရှိ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း တစ်စုံတစ်ရာ သမိုင်းမှတ်တိုင်၊ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဒီကွင်းကြီးက သမိုင်းအငွေ့အသက်ရှိတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိက လက်ဝယ်ကို ထားမယ့်အစား အများပြည်သူအတွက် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက် မလုပ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင် သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာပဲ”
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ပေးချင်တိုင်း ပေးလို့မရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုသမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်းဟာ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကွင်းဖြစ်လို့ ပေးကိုပေးလို့ မရတဲ့နေရာ၊ မပေးဘဲ ထိန်းသိမ်းထားရမယ့် နေရာပါ။
အစိုးရသစ်အနေနဲ့ သက်တမ်း တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ပဲ ကျန်တယ်။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ မြေကွက်တွေလည်း အစိုးရလက်ထဲမှာ မကျန်သလောက် ဖြစ်လာပြီ။ လက်ကျန် တစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာ ရသလောက် ထိုးပေးသွားဦးမလား၊ ချန်ထားပေးခဲ့မလား၊ ထိုးပေးပေး ချန်ထားထား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၁ ကတော့ ရှိနေဦးမှာဖြစ်သလိုနောက် အစိုးရလက်ထက်အထိ ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပဲ တာဝန်ခံရမှာပါ။
ပြင်ဦးလွင်က မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ မြေသိမ်းတိုက်ပွဲ....
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၇ဲ့ ဂုဏ်ဆောင်
မြန်မာပြည်ခါးလယ်ကို စလွယ်သိုင်းဖြတ်ပိုင်းထားတဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းကြီးကနေ တရုတ်ကို ရေနံစိမ်းပို့လို့ရမယ့် မဒဲ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို အကြိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ။
ဒေသခံတွေကိုသာ ထိုက်တန်တဲ့လျော်ကြေးပေးမယ် တကယ်ဦးစားပေးအလုပ်ခန့်ထားမယ် ဆိပ်ကမ်းကြီးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲခွင့် အစိုးရလက်ထဲတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက် ဝမ်းသာစရာပဲ။
ဒါပေမယ့် အနှစ်သုံးဆယ် BOT စာချုပ်မှာ မြေငှားအဆင့်သာသာနဲ့တော့ ဘာမှလုပ်ပိုင့်ခွင့်မရှိတာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
တကယ်အကျိုးအမြတ်ထွက်တာက တရုတ်ပါ။ ဆိပ်ကမ်းက တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးပဲမို့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ရေနံကို အဖြူရရ အမဲရရ လိုအပ်နေတဲ့တရုတ်ကို ခုလို အမြတ်ထုတ်ခွင့်ပေးမယ့်အစား တရုတ်မဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုနဲ့ ဒီလို စီမံကိန်းမျိုးကို လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်လက်ထဲ စီမံခွင့်နဲ့ နည်းပညာရမှာပါ။
ရေတောင်ဝယ်သုံးနေရတဲ့ စကာင်္ပူဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အချက်အချာကျတာကို အသုံးချပြီး ရေနံချက်စက်ရုံကြီးတွေကို သူ့ဆီမှာတည်ထားပါတယ်။ အဆင့်မီတဲ့ သဘာဝဝန်းကျင် ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံကို သူ့ဆီသယ် သူ့ဆီမှာချက်ပြီး ပြန်ရောင်းပါတယ်။
တရုတ်ကို ကြောက်နေရမယ့် အောင်မင်းလို အစိုးရဝန်ကြီးလည်း စလုံးအစိုးရအဖွဲ့ထဲ စောက်ဆံအကုန်ခံပြီး တာဝန်ပေးမထားပါဘူး။ ဒီလို ကိုယ့်နိုင်ငံအချက်အချာကျတာကိုကိုင်ပြီး ပွဲစား ကုန်သည်လုပ်ပြီး ငှက်ပျောတောထူနေတဲ့ ကျွန်းသာသာဘဝကနေ စကာင်္ပူ ချမ်းသာသွားတာပါ။
လက်တွေ့ခန်းမဝင်ရဘဲ ဘွဲ့အစုတ်ပလုတ်ရခဲ့တဲ့ ခပ်ချာချာ သဘောင်္သားတစ်ယောက်က ဒီလိုတွေးတတ်သေးရင် ခေတ်မီနည်းပညာတွေ စီမံပညာတွေသင်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ရေးအမြင် ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးနဲ့ မဟာဗျူဟာအမြင်တွေ အပြည့်တတ်ထားကြတဲ ပြင်ဦးလွင်ဆင်းတွေ မသိဘဲ မတွေးတတ်ဘဲ နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ စလွယ်သိုင်း ခါးလည်ပိုင်းထားတဲ့ ပိုက်လိုင်းကြီးကို တင်ဒါမခေါ် အပြိုင်မရှိ ခပ်လွယ်လွယ် ဘာလို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြတာပါလဲ။
ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကို အရှုပ်ထုပ်တွေ အဖျက်အမှောင့်တွေလို့မြင်နေတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ကတော့ ဧရာဝတီမှာ အစိုးရက အလျော့ပေးလိုက်ရတာကို ရည်ညွှန်းပြီး လက်ပံတောင်းဆန္ဒပြသူတွေကို..
Thein Min Win ရေးသည်။
“The Plunder of Myanmar”
တရုတ်နိုင်ငံ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ အတင်း အဓမ္မ ခိုးယူ လုယက်၊ အမြတ်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ “The Plunder of Myanmar” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာ အယ်ဒီတာအာဘော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှာ အခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
at 11:26 1 comments Links to this post
မြန်မာပြည်၏ တောင်ဘက်အစွန်စုံးဒေသဖြစ်သော လူသိထင်ရှားကျော်ကြားသည့် မူးယစ်ရာဇာများ နှင့် မာဖီးယား ဂိုဏ်းများ အမြဲတစေ လာရောက် အပမ်းဖြေလေ့ရှိသော သူဌေးကျွန်းသို့ ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် တပ်မတော် ဇိမ်ခံ စစ်ရေယာဉ်ဖြင့် ကော့သောင်းမှ ရေမိုင် တစ်မိုင် ကျော်သာသာ ကလေးမျှသာဝေးသော အဆိုပါကျွန်းသို့ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီများ၏ ကတော် (၁၈) ဦးထက်မနည်း ရောက်ရှိလာသည်။
ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များရှိလာလျင် ဆက်လက် တင်ပြပေးပါမည်
လက်ပံတောင်းဒေသတွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံတော် အလံများ သံတောင်သတ္တုတွင်းမှ လွှင့်တင်ထားသော ကိုရီးယားနှင့် အခြား အမည်မသိ အလံတော်များ ချင်းတောင်တန် တလျောက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ်နိုင်ငံအလံများ ကိုကိုကျွန်းတွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ် အလံများ ရတနာ နှင့် ရွှေဂစ်တို့တွင် လွှင့်တင်ထားသော တိုင်းတစ်ပါးအလံများ စသောစသော အလံများကိုလည်း အမြန်ဖြုတ်ချခိုင်းပြီး မဖြုတ်ချပါက တရားစွဲမယ် ချေမှုန်းမယ်
လက်ပံတောင်း ( အရေးပေါ် ဖြစ်နေပြီ) ၀ိုင်းဝန်းပေးကြပါ
သုံး၍ အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်ပြီးခြံစည်းရိုး ခတ်ရန် အာဏာပိုင်တို့ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် ရွာသားများ
တားမြစ်ကန့်ကွက်ရန် တစ်ရွာလုံးရှိလူကုန် ထွက် နေကြပြီ။
Ko Han Win Aung Just now
at 19:180comments Links to this post
at 01:200comments Links to this post
လက်ပတောင်း အတွက် သီချင်း
Post by Aung Ko.
ယူရေနီယံ နဲ တေဇ ( ဒေါက် ခင်မောင်ညို ရေးသည်။ )